avylavitra · Janoary 2013 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Janoary, 2013
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Janoary, 2013
Vao haingana ny Minisitry ny Fifandraisana Amin'ny Any Ivelany no namoaka pasipaoro diplaomatika roa [pt] ho an'ireo pasitora mpitarika ny fiangonana evanjelika Igreja Mundial do Poder de Deus (Fiangonana Manerantanin'ny Fahefan'Andriamanitra), Valdemiro Santiago de Oliveira sy ny vadiny Franciléia de Castro Gomes de Oliveira, niteraka fifanakalozan-dresaka iray momba ny fahefan'ny andrim-panjakana sy ny fanitsakitsahana ny tena famaritana ny hoe tsy fironana amin'ny ara-pinoana (laika) voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ao Brezila.
Afrika Mainty 21 Janoary 2013
Ny 16 Janoary 2013, natao tao Nairobi renivohitra ny hetsi-panoherana am-pilaminana teo ambanin'ny teny faneva Fandevenana Fanjakàna #BallotRevolution. Nanao antso ho an'ireo Keniana mpiray tanindrazana aminy izy ireo mba tsy handrotsaka vato hifidy indray ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka hatao ato ho ato, voalahatra ho ny 4 Martsa.
Amerika Latina 20 Janoary 2013
Androany, Sabotsy 19 Janoary 2013 no fiafaran'ilay “hazakazaka faran'izay mampidi-doza indrindra eto ambonin'ny tany”: ny Dakar, ao Santiago. Mientanentana momba ny tsipika famaranana ireo Shiliana mpisera anaty aterineto. Indrindra indrindra fa andrandrain-dry zareo ny hahita ilay mpiray tanindrazana aminy, Francisco "Chaleco" Lopez [es], mpitaingina moto, mety hanatsara ny toerana fahatelo azony tamin'ny andiany 2009 amin'ity andiany iray hifarana ao an-tanindrazany ity